Azonxeshezelwa amaciko abeqashiwe
UNGQONGQOSHE wamaSiko namaCiko, uMnuz Nathi Mthethwa, othe azonxeshezelwa amaciko njengoba kumi yonke into ngenxa yokuhlasela kweCoronavirusIsithombe: TWITTER
IPHENDULEKILE imikhuleko yamaciko akuleli abekhala ngendlala njengoba kuzovalwa izwe thaqa izinsuku ezingu-21 ngenxa yokuhlasela kweCoronavirus, uhulumeni ezowanxephezela.
UNgqongqoshe wezamaSiko nobuCiko kuzwelonke, uNathi Mthethwa, uthe babeke uR150 million ukunxephezela amaciko okumiswe imicimbi abemenywe ukuyo nandisa kuyo.
Uthe ukuphazamiseka kwemicimbi, ikakhulukazi ebixhaswe uMnyango wabo kulimaze amaciko abazowanxephezela ngale mali.
Emacikweni azohlumula uthe bazobheka kakhulu kwasezakhele igama ezweni naphesheya kwezilwandle.
UMthethwa umemezele lokhu esithangamini sabezindaba izolo ntambama, ozakwabo bebekhuluma ngezinhlelo zokuzama ukulungisa isimo njengoba kuhlasele ubhubhane futhi kuzobe kunganyakazi lutho ezweni. Amaciko abesevele ekhala, ethi wona uhulumeni akathi vu ngokuthi uzowasiza ngani njengoba ephila ngokunandisa.
“Amaciko azokhokhelwa imali ngenxa yokuthi abeseceliwe ukuthi abe yingxenye yemicimbi ethinta umnyango. Okunye esiphezu kwakho manje, siyazi ukuthi amaciko athola izimali zawo uma umculo othinta wona uke wadlalwa emsakazweni nakwithelevishini, lezo zimali zijwayele ukuthi ziqale ukufakwa izicelo zazo ngoJuni nangoDisemba kuphela. Kodwa sesikhulumile nezinkampani ezifana noSamro, ukuthi ziqale ukwamukela izicelo zabaculi, kusuka ngenyanga ezayo bese beyabakhokhela ngokushesha,” kuchaza uMthethwa.
Uveze nokuthi sebekutholile ukuthi kukhona izinhlelo ezingase zingaqali ngesikhathi kwithelevishini ngenxa yokubambezeleka.
“Yizona zonke izinto esizozibheka lezo ukuthi zilungiseleka kanjani njengoba sikhuluma nophrojusa nezinkampani eziqophayo.
Siyazi ukuthi izinhlelo ezikhonjiswa bukhoma eziningi kuleli sezimisiwe, ngakho sizokulungisa konke okuthinta amaciko,” kuchaza uMthethwa.
Uthe nezikhungo ezikhombisa imidlalo yasesteji namafilimu nakhona izingxoxo ziyaqhubeka ukuthi kuzokwenzakani ngemidlalo namafilimu, obekumele akhonjiswe njengoba amaciko edinga imali kulesi sikhathi esinzima.
Mayelana nokuthi amaciko azohlomula kanjani, uthe bazoxhumana nabasebenzi bomnyango ezifundazweni ezehlukene okuyibona abazosiza amaciko.
Ubalule nokuthi bamatasa basezingxoxweni zokuthi umculo wakuleli udlalwe kakhulu eziteshini zomsakazo nakwithelevishini, ukuze amaciko ahlomule.
Umengameli womfelandawonye wezinhlangano zamaciko, iThe Cultural and Creative Industries Federation of South Africa (CCIFS), uJoy Mbewana uthe bajabule kakhulu ngokuthi kuphenduleke izinkulumo ababe nazo nongqongqoshe.
“Sijabulile nakuba sazi ukuthi kusazoba khona izinxushunxushu ngoba akachazanga ukuthi izohlukaniswa kanjani kodwa ngicabanga ukuthi njengoba sinomfelandawonye ohola izinhlangano, kuyolekelela ukuthi sikhulume ukuthi icazwa kanjani, iye kobani.
Siyazi phela kulo mkhakha wethu ukuthi akuzigebengu. Sizoqinisekisa siyiCCIFSA ukuthi iya ngempela kubantu abafanele. Sizokhuluma nongqongqoshe nemboni,” kusho uJoy.
Uthe bazobheka abashayeke kakhulu ekuvalweni kwemicimbi nezinye izinhlelo.
“Ibingasihleli kahle eyokuthi umengameli ukhulume ngabo bonke abantu, sangabalwa.”
Uthe izinhlangano ezizimele azilekelele uhulumeni ukuze amaciko angadlelwa imizi, kuxoshwe nezingane ezikoleni.